२६ पुस, डढुवा । जलविद्युत् आयोजनाले ‘समुदाय सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत गर्नुपर्ने योगदानभन्दा ४ गुणा बढी माग गरी ३ दशमलव ३ मेगावाटको मिदिमखोला जलविद्युत् आयोजना माथि आक्रमण भएको छ । लमजुङको मध्यनेपाल नपा–८ करापु डढुवास्थित उक्त आयोजनामा स्थानीयवासीद्वारा आक्रमण भएको हो ।
ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा १ सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले ‘सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत कुल लगानीको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले शून्य दशमलव ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत करीब रू. ८० करोड रहेको छ । कार्ययोजनाले तोकेअनुसार समुदायका लागि आयोजनाले गर्नुपर्ने खर्च करीब रू. ६० लाख हुन आउँछ ।
तर, आक्रमणकारीहरूले करीब रू. ३ करोडबराबरको लागत लाग्ने विकास निर्माणको माग गरिरहेको आयोजना सूत्रको भनाइ रहेको छ ।
गत मङ्गलवार स्थानीय केही मानिसलाई लिएर गुण्डागर्दीको शैलीमा आएका मानिसले आयोजनाले आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने धम्की दिएर गएको थियो । त्यसका २ दिनपछि मोटरसाइकलमा आएका २०–२५ जनाको समूहले आक्रमण गरी क्षति पु¥याएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । आक्रमणकारीले आयोजनाको आवासगृह र कार्यालयको पर्खाल, ढोका, झ्याल साथै कम्प्युटर, दराजलगायत सामग्रीमा क्षति पु¥याएका छन् । त्यस्तै ग्यारेजमा राखिएको बा १३ ज २४६३ नं. को पिकअप जीपमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
आफूहरूले स्थानीय रूपमा केही मात्रामा सहयोग गरेको र आयोजना नाफामा जान थालेपछि थप सहयोग गर्नसक्ने स्रोतले बताएको छ । ‘आयोजनामा थुप्रै स्थानीय बासिन्दाको पनि लगानी भएकाले आयोजना कहिलेबाट नाफामा जान थाल्यो थाहा भइहाल्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामी आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अर्कोतर्फ आक्रमणका कारण आयोजनाको करीब रू. ७५ लाख बराबरको क्षति भएको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
तर, निर्माण सम्पन्न गरी वेट टेष्ट (राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नुअघिको परीक्षण) गरिरहेको अवस्थामा आक्रमण भएका कारण आयोजनाको विद्युत् व्यापार प्रारम्भमै रोकिएको छ । ‘आक्रमणकारीको धम्कीका कारण हामी आयोजना चलाउन सकिरहेका छैनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत्को मिटर घुम्न शुरू भइसक्यो ।’ आक्रमणपछि दुई पक्षबीच वार्ता हुन नसकिरहेका कारण आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन रोकिएको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको छलफलबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शेयर खुला गर्न धितोपत्र बोर्डमा दिएको निवेदन प्रक्रियामा रहेको छ ।
२०७१ सालको माघबाट निर्माण प्रारम्भ भएको उक्त आयोजनाले निर्माणकालमै भूकम्प तथा नाकाबन्दीको असर भोगिसकेको छ । यसका कारण आयोजनाको काम रोकिनुका साथै आयोजनाको लागत बढ्न गएको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
यता पटकपटकको अनुरोधपछि पनि आयोजना पक्षबाट आफ्ना मागमा सुनुवाइ नभएपछि आक्रमण गरेको डढुवाका स्थानीयले बताएका छन् । डढुवाका स्थानीयले आयोजनाको बाँध निर्माणका क्रममा भत्किएका पाटीको निर्माण गर्नुपर्ने, बाँध क्षेत्रस्थित लाङदी देवीको मन्दिर पुग्ने पुलको निर्माण र गाउँसम्म पुग्ने मोटरबाटो निर्माण गरिदिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका थिए । स्थानीयले बाँध क्षेत्रमा अवरोध पुर्यारउँदा मात्रै २० लाख बढीको क्षति भएको आयोजना पक्षले जानकारी गराएको छ । जनसम्पर्क अधिकृतका अनुसार स्थानीयले २ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको योजना माग गरेका थिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक जयराम वन्तका अनुसार घटनामा संलग्नहरू फरार रहेको र खोजीकार्य तीव्र पारिएको छ । घट्नापछि आयोजनामा केही काम अघि बढ्न सकेको छैन भने स्थानीय र आयोजना पक्षबीच द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावनासमेत हराएको छ ।